Inona no ampiasaina amin'ny antibiotika cephalosporins? - BALLYA
Posted on March 19, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona avy ireo cephalosporins?
Fitsipika fampiasana cephalosporins
Tsy misy fanararaotana
Raiso am-bava izany raha vitanao, ary mitete amin'ny intravenna
Tsy azo afangaro amin'ny fanafody hafa izy io
Alikaola na fanafody
Ny voka-dratsin'ny cephalosporins nalaina tamin'ny alikaola
Zava-mahadomelina izay miteraka fanehoan-kevitra disulfiram
Ny elanelana misy eo amin'ny alikaola sy cephalosporin
Cephalosporins no teny mahazatra amin'ny antibiotika cephalosporin. Cephalosporins dia kilasin'ny antibiotika azo tamin'ny fanovana semi-synthetic ny rojo sisin'ny cephalosporin C voajanahary azo tamin'ny Cephalosporins.
Misy karazany 30 eo ho eo ny fampiasa matetika, izay mizara ho iray, roa, telo, efatra, ary dimy araka ny fotoana namoronana azy ireo sy ny tsy fitovizan'ny toetran'ny bakteria.
Ao amin'ny tsenan'ny antibiotika, ny antibiotika cephalosporin dia mitana ampahany betsaka, ary ny mpanelanelana mifandraika amin'izany dia mampiseho koa ny mety ho tsenan'ny tsena. Ny karazana antibiotika cephalosporin malaza indrindra dia misy ny sodium ceftriaxone, sodium acfazolin, cefotaxime, ceftriaxone, cefoperazone ary cefuroxime (ester), sns. peratra, asidra acététika tetrazolium, thiotetrazole, HO-EPCP, methoxyamine hydrochloride, sira amine furan (SIMA) ary isocyanate asidra chlorosulfonic, sns.
The cephalosporine Ny fitambarana dia nalaina voalohany tamin'ny 1948 avy amin'ny mpahay siansa italiana Giuseppe Brotzu avy amin'ny cephalosporin ao amin'ny hady any Sardinia. Hitany fa nanafoana akora sasany ireo akrémonium ireo, izay afaka manohitra tsara ny typhoid bacillus izay miteraka tazo typhoid. Ny University of Oxford dia namoaka tamim-pahombiazana ny cephalosporin C, izay azo antoka lactamase beta, saingy tsy dia mandaitra loatra amin'ny fampiasana klinika. Asidra Clavulanic dia atiny misy oksizenina vaovao beta lactam antibiotika novokarin'i Streptomyces.
Ny votoatin'ny cephalosporine dia 7-aminocephalosporin (7-ACA raha fintinina), izay nalaina tamin'ny cephalosporin C ary voamarina fa mitovy amin'ny votoatin'ny penisilinina (izany hoe asidra 6-aminopenicillanic, 6-APA). Ny sisin'ny sisin'ny 7-ACA dia novaina ary antibiotika tena ilaina tokoa no azo. Ny voalohany cephalothine dia navoakan'i Eli Lilly tamin'ny 1964.
Ny cephalosporins dia azo ampiharina amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana. Noho izany, raha voan'ny sela sy taova isan-karazany, raha mbola mahatsapa ny cephalosporins ireo bakteria pathogenika dia azo ampiasaina izany. Izy io dia karazana famonoana bakteria, izay midika fa raha ampy ny fifantohana dia afaka mamono ny bakteria, tsy toy ireo mpiasan'ny bakteria toy ny tetracycline, erythromycine, ary chloramphenicol. Noho izany, cephalosporins azo ampiasaina areti-mifindra lehibe kokoa.
Ny cephalosporins dia manana spérectra antibacterial somary malalaka kokoa. Cephalosporins manana vokatra tsara bakteria amin'ny bakteria Gram-positive na bakteria Gram-négatif. (Bakteria misy pentina miaraka amin'ny vahaolana amin'ny fandotoana grama. Ny bakteria misy loko volomparasy volomparasy dia bakteria miabo, ary ny mena dia bakteria ratsy.) Midika izany fa ny cephalosporins dia manana hetsika bakteria sasany ho an'ny bakteria any amin'ny departemanta klinika isan-karazany toy ny fitsaboana anatiny, fandidiana, fiterahana, sampana mpitsabo aretin-tsaina sy dermatolojia.
Raha mamokatra anzima sasany manimba ny zava-mahadomelina misy bakteria sasany ny bakteria, dia mety hanjary tsy ho voan'ny fanafody anti-bakteria sasany izy ireo. Ohatra, ny bakteria dia mahatohitra ny penicillin, raha ny cephalosporins kosa miorina amin'ny ankamaroan'ny anzima vokarin'ny bakteria. Ka afaka manolo penisilinina mamono bakteria.
Betsaka kokoa ny karazana cephalosporins nalaina am-bava. Izany dia satria maro amin'izy ireo no entina am-bava ao anaty vavony dia sarotra simban'ny asidra vavony. Ka somary milamina ny vokan'ny zava-mahadomelina.
Ampitahao amin'ny penisilinina, avo kokoa ny fihenan'ny allergy penicillin, indrindra fa ny penicillin dia mety hiteraka fikorontanana anaphylactic ary mety hahafaty. Ny firafitry ny molekiola an'ny cephalosporine dia mitovy amin'ny penicillin ary mety hiteraka fanehoan-kevitra mahazaka ihany koa, saingy ny tahan'ny fihenan'ny alikaola dia ambany noho ny an'ny penicillin, ary ny fihenan'ny fikorontanana anaphylactic dia ambany kokoa aza.
Noho ireo toetra voalaza etsy ambony ireo, ny cephalosporins dia manana lanja azo ampiharina bebe kokoa amin'ny fampiharana ara-pahasalamana.
1. Tsy misy fanararaotana
Satria cephalosporin dia manana tombony maro dia maro, ny marary sy ny dokotera dia samy mankafy azy avokoa. Rehefa marary na mararin'ny tazo ny marary iray, na karazan'aretina inona na inona, dia mampiasa cephalosporin aloha izy ireo, indrindra ny cephalosporin amin'ny taranaka fahatelo novokarina amina betsaka tany Chine niaraka tamin'ny vidiny ambany. Noho izany, fahita matetika ny fanararaotana taloha.
Tao anatin'izay dimy taona lasa izay dia bakteria ratsy maro toy ny Escherichia coli sy bakteria pnemonia izay sarotra tsaboina amin'ny cephalosporium an'ny andiany fahatelo no nipoitra tany Chine.
Ny spektrum maharitra lactamase beta vokarin'ireto bakteria ireto dia afaka manimba cephalosporins ary mamokatra fanoherana ny zava-mahadomelina. Any Shanghai, ny habetsaky ny bakteria mahatohitra ny cephalosporin an'ny andiany fahatelo, toy ny bakteria Escherichia coli sy pnemonia, dia nitentina 10% -40%. Cephalosporins maro no ampiasaina. Vokatr'izany, ny vokatra tsara azo avy amin'ny bakteria avy amin'ireto zava-mahadomelina ireto dia nanjary nalemy tokoa, ary ireo aretina aterak'ireo bakteria tsy mahazaka zava-mahadomelina ireo dia sarotra ara-pitsaboana.
2. Raiso am-bava izany raha vitanao, ary mitete amin'ny intravenna
Maromaro ny marary mangataka amin'ny dokotera mba hanome azy ireo cephalosporins intravenous hahafahana manasitrana aloha. Tsy mety izany. Na ny fampiasana cephalosporin, na ny fampiasana azy intravena na am-bava dia miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny dokotera.
Rehefa mampihatra cephalosporins, tsy maintsy misy ny varotra varotra. Raha somary malefaka ny aretina dia tokony hofidiana ny fitantanana am-bava. Misy fiomanana am-bava ho an'ny cephalosporins isaky ny taranaka. Raha matotra ny aretina dia azo dinihina ny fitantanana intravena.
Ary ny fitetezana intravenous dia tsara kokoa noho ny tsindrona bolus. Fa maninona no izao? Izany dia satria cephalosporine dia mety hiteraka fiatraikany ratsy koa. Raha manana fihenjanana mahery vaika ilay marary na fiatraikany ratsy hafa momba azy, ary tsindrona bolus no ampiasaina, dia hiditra haingana ao amin'ny ra ilay fanafody ary tsy afaka manakana ny fitantanana ny dokotera. Fa raha misafidy fampidirana drip ianao, na dia haingana aza ny drip, raha vao misy fiatraikany ratsy ny marary dia azo hahenaina avy hatrany ny hafaingan'ny fampidirana, ary azo fehezina avy hatrany aza ilay fantsona hampiatoana ny fitantanan-draharaha.
3. Tsy azo afangaro amin'ny fanafody hafa izy io
Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony afangaro ny fanafody famonoana bakteria sy ny fanafody hafa, na dia fanafody anti-bakteria aza izy ireo. Ohatra, raha marary mitete antibiotika roa ny intravenous, cephalosporine ary gentamicin, tsy azo atao ny mametraka ireo rongony roa amin'ny tavoahangy iray ihany mba hampidirina amin'ny fotoana iray. Satria samy hafa ny toetra ara-batana sy simika ananan'ny fanafody anti-bakteria isan-karazany.
Raha ampiarahina miaraka izy ireo, angamba tsy miova ny lokony, ary tsy misy rotsakorana, fa raha ny marina dia mety nifanerasera izy ireo, nampihena ny voka-dratsin'ny bakteria, na koa mamokatra fitambarana vaovao manimba ny vatan'olombelona. Noho izany, ny fampiharana ny fanafody famonoana bakteria dia tsy maintsy apetraka misaraka, ary ny fanafody roa dia tsy tokony hapetraka ao anaty kaontenera iray miaraka.
4. Alikaola na fanafody
Aza mihinana fanafody alohan'ny na aorian'ny fisotroana, na mora tohina na torana. Mety hampidi-doza mihitsy aza ny zokiolona.
1. Fihetsika disulfiram
Cephalosporin sy alikaola dia mety misy fihetsika toy ny disulfiram. Disulfiram dia zava-mahadomelina amin'ny fisorohana zava-pisotro misy alikaola. Rehefa avy nihinana an'ity fanafody ity ianao, na dia misotro alikaola kely aza dia hiaina tsy fahazoana aina lehibe ny vatanao.
Ny fizotran'ny metabolika ny étanol ao amin'ny vatana dia azo faritana toy ny hoe: namboarina voalohany ho acetaldehyde tao amin'ny vatana, ary avy eo navadika ho gazy karbonika sy rano miaraka amin'ny fanampian'ny anzima mifandraika. Disulfiram sy zava-mahadomelina hafa mitovy amin'izany dia afaka manakana ny anzima mifandraika amin'ny aldehyde rehefa alika amin'ny alikaola, acetaldehyde miangona ao amin'ny vatana mamokatra andiana fihetsika ara-batana. Mifanaraka mivantana amin'ny fatran'ny zava-mahadomelina sy ny habetsaky ny alikaola ny fahasarotany. Ity fanehoan-kevitra ity dia matotra kokoa amin'ny zokiolona, ​​ny ankizy, ny marary voan'ny aretim-po sy ny lalan-dra ary ireo izay mora tohina amin'ny etanol, ary matetika dia mitranga 15-30 minitra aorian'ny fanafody sy fisotroana.
Ny soritr'aretin'ny fanehoan-kevitra toy ny disulfiram dia manan-danja tokoa, toy ny famafazana tarehy, hyperemia conjunctival, fahitana manjavozavo, fanina, maloiloy, fandoavana, hatsembohana, fanaintainan'ny tratra, aretin-tratra myocardial, tsy fahombiazan'ny fo, dispnea, ratra amin'ny aty, fivontosana ary fahafatesana, Sns
2. Zava-mahadomelina izay miteraka fihenan'ny disulfirams
Noho izany, inona ny fanafody mahazatra alikaola alikaola izay mety hiteraka fihetsiky ny disulfiram?
A. Fanafody Cephalosporin
Cefoperazone, Cefoperazone sy Sulbactam, Ceftriaxone, Cefazolin (Pioneer Ⅴ), Cefradine (Pioneer Ⅵ), Cefmetazole, Cefminol, Laoxycephalosporin, Cefmenoxime, Cefazolin Meng Duo, Cefamine (Pioneer IV), Cefaclor, sns. Anisan'ireny, ny cefoperazone sy ny sulbactam no mora tohina indrindra ary mety hiteraka fihetseham-po toy ny disulfiram. Raha mihinana sôkôla liqueur, rano Huoxiang Zhengqi ny marary iray, na koa mitsabo ny hoditra maratra amin'ny alikaola fotsiny rehefa avy naka io zava-mahadomelina io dia hisy ny fanehoan-kevitra toy ny disulfiram. Ho fanampin'izany, misy tatitra mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra toy ny disulfiram vokatry ny ceftazidime.
B. Ny fanafody Nimidazole toy ny metronidazole, tinidazole, ornidazole, secnidazole.
C. Fanafody anti-bakteria hafa: furazolidone, chloramphenicol, ketoconazole, griseofulvin, sns.
Ho fanampin'ny alikaola, ny olona mandray cephalosporins dia mila mitandrina manokana amin'ny rano Huoxiang Zhengqi. Ny rano Huoxiangzhengqi dia misy akora avo lenta misy akony mahomby sy mahasitrana ary miasa haingana, izay misy ifandraisany amin'ny alikaola 40% -50% ao anatiny. Noho izany dia tokony jerena manokana ny "rano Huoxiangzhengqi".
3. Ny elanelana misy eo amin'ny alikaola sy cephalosporin
Mety hanontany tena ny olona sasany hoe, tsy tokony hisotro toaka ihany ve mandritra ny fitsaboana? Ny valiny dia "tsia". Rehefa avy nihinana ny zava-mahadomelina, ny lanjan'ny fandraràna alikaola manokana dia mila lanjany arakaraka ny toe-javatra niainany manokana.
Araka ny tatitra momba ny literatiora mifandraika amin'izany, fanehoan-kevitra toy ny disulfiram vokatry ny cephalosporine antibiotika mifandraika be amin'ny fihinanana alikaola, saingy misy ny tsy fitovian'ny tsirairay satria samy hafa ny tahan'ny alikaola sy ny zava-mahadomelina, fa arakaraka ny halavan'ny elanelam-potoana misy eo amin'ny fisotroana sy ny fanafody no mampihena ny trangan'ireny fanehoan-kevitra ratsy ireny.
Ny fandinihana feno dia nampiseho fa ny fihetsika toy ny disulfiram dia mety hitranga 5 andro alohan'ny fanafody, mandritra ny fanafody, na ao anatin'ny 7 andro aorian'ny fitsaboana, ary ny ampahany betsaka amin'ny fihenan'ny disulfiram dia niseho nandritra ny fitsaboana. Tsara ny manamarika fa misy ihany koa ny tatitra momba an'io fanehoan-kevitra io rehefa avy nisotro herinandro taorian'ny nijanonan'ny zava-mahadomelina. Mba hisorohana ny fanehoan-kevitra toy ny disulfiram dia tokony manatona ny dokotera ianao raha mampihatra ireo zava-mahadomelina ireo ao anatin'ny fito andro aorian'ny fisotroana, ary tokony hifady toaka ao anatin'ny fito andro aorian'ny fijanonanao ny zava-mahadomelina. Ny vanim-potoanan'ny fifadian-kanina dia tokony ho 14 andro hanakanana ny ahiahy. Raha vantany vao miseho ny fanehoan-kevitra toy ny disulfiram dia tokony hatsahatra eo noho eo ny zava-mahadomelina ary tokony horaisina mavitrika ny fepetra fitsaboana mifanaraka amin'izany.
Inona no tokony hataontsika raha mahita izany toe-javatra izany ny namana manodidina antsika? Torohevitra izy mba hampijanona ny fanafody sy ny vokatra misy alikaola ara-potoana, angataho ilay marary handray fihetsika marindrano mba hihazonany ny fofonainy. Afaka miala sasatra tsy ho ela ny malemy fanahy, ary ny mafy kokoa dia tokony halefa any amin'ny toeram-pitsaboana akaiky indrindra.
Cephalosporin dia be mpampiasa amin'ny fiainantsika andavanandro, saingy zava-dehibe ny manamarika fa ny fitambaran'ny cephalosporin sy ny alikaola dia matetika manimba ary indraindray mahafaty. Ka toy ny tsy misotro toaka rehefa mitondra fiara dia tsy tokony misy fisotroana mandritra ny fitsaboana.
BALLYA manome a kitapo fitsapana combo betalactam cephalexin mba hilazana aminao raha misy residu beta lactams sy reside cephalosporin amin'ny vokatra ronono nohaninao isan'andro.
Oniversite Tulane: cephalosporins